सुन्दर युवतीलाई देख्दासाथ यी ७ कुरामा पुगिहाल्छ पुरूषको आँखा ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/सुन्दर युवतीलाई देख्दासाथ यी ७ कुरामा पुगिहाल्छ पुरूषको आँखा !
कुनै पनि महिला पुरुष एक अर्काप्रति आकर्षित हुनु सामान्य मानिन्छ । कुनै पनि पुरुषहरुले पहिलो पटक महिलालाई भेट्दा के कुरामा ध्यान दिन्छन् भन्ने हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।
सातौँ : शरीरको बास्नामा पनि केटाहरुले ध्यान दिइरहेका हुन्छन् ।
यो पनि पढाैँ – कहाँ छिन नायीका मौशमी मल्ल ?
कुनै जमानाकी चर्चित नायीका मौशमी मल्ल अहिले फिल्म क्षेत्रवाट वाहिर छन् । उनी चितवनमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएकी छन् । १५ वर्षको उमेर देखि उनी चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर अहिले भने उनी चलचित्र देखि केही टाढा छन् । तर पनि त्यो फिल्म क्षेत्रलाई भने उनी सम्झिरहन्छिन् ।
उनले आफुले चलचित्रमा काम गर्दा भोगेका अनुभव र समस्याहरुका बारेमा कुराकानी गरेकी छन् । निकै राम्रो अभिनय र नृत्यका लागि मौशमी निकै चर्चित थिइन् । अहिले पनि उनी चलचित्रमा सकृय नै छन् तर पहिलाको जस्तो ब्यस्त भने छैनन्।
एक वर्षमा एक दुईवटा मात्र काम गरेको बताउने मौशमी आफुलाई धेरै अफर आएपनि गर्न नभ्याएको बताएकी छन् । आमा प्रति मेरो धेरै जिम्मेवारी छ, त्यही भएर फिल्ममा धेरै समय दिन नसकेको हो ।
उनले आफु काममा निकै अनुशासित भएका कारण आफुलाई धेरै कामको अफर आउने गरेको पनि बताएकी छन् ।